Ulurekhoda njani udliwanondlebe lwePodcast kwiSkype | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMeyi 23, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngoku sinezinto ezimbini zodweliso lwethu lodliwanondlebe neengcali I-Podcast yethu kwaye ihambe kakuhle kakhulu. Sele sinayo Umda weRadiyo yeWebhu eyimpumelelo kwaye yenziwe ngokubambisana namaqabane ethu kwiQhinga leSiza. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, sasifuna ukuthatha ukuntywila okunzulu ngenene ingcali ngelixa i-EdgeTalk igxile kwi Sihloko.
Ngeengcali kwilizwe liphela, phantse akunakwenzeka ukuba ulungelelanise ishedyuli yomntu wonke ukuze ungene kwisitudiyo kudliwanondlebe, nangona! Sigqibe kwelokuba eyona ndlela yokwenza le nto yayikukuyenza iprojekthi esecaleni kwaye sisebenzise i-Skype kunye neGarage yebrown ukuyidibanisa yonke. Sacela uncedo nguvulindlela uBrad Shoemaker osuka I-Creative Zombie Studios ukwakha iintengiso zethu, ii-intro kunye ne-outro. UBrad usebenzise iqela lomhlobo wam osenyongweni, Joyina abafileyo, ngasemva umculo!
Sivavanye iqela leendlela zokurekhoda umnxeba kwaye safumanisa ukuba ukurekhoda umnxeba we-Skype yeyona ndlela ilula. Sifumene Shayela irekhoda ye-Skype kwi-Ecamm yabonwa ngerhafu enye yeedola ezingama-29.95! Isishicileli siyazivelela kwaye siqala ngokuzenzekelayo ngayo yonke iminxeba- ukurekhoda zombini ividiyo kunye nesandi. Ke-ukuba uyafuna, unokwenza nodliwanondlebe lwevidiyo ngale ndlela!
Sivavanye itoni yemakrofoni kwaye eyona ndlela ilula kunye neyona isebenzayo esiyifumeneyo kukusebenzisa nje I-Logitech ClearChat Comfort / iseti yentloko ye-USB. Kubonakala ngathi ngalo lonke ixesha ndinesandi esiphuma kwizipikha zokubonisa, kuyayiphazamisa into yokurekhoda ukuze ndisebenzise nje iseti yentloko.
Inyathelo elilandelayo kukutsala ukurekhodwa kwiGarageband. Ndirhuqa nje ifayile kwifayile emva koko ndifumane yonke iaudiyo endifuna ukuyisusa ngokwahlulahlula umkhondo kunye nokucima izandi ezingafunekiyo. Ndiza kungenisa isingeniso sethu somsindo, iintengiso, kunye ne-outro. Zahlula-hlula iingoma apho ndifuna ukuba iintengiso zihambe kwaye ndirhuqe isandi ngasinye kwithrekhi nganye ukuze sigubungele kakuhle esinye nesinye.
Ngenxa yesiseko sobhaliso esibanzi esakhele kuso IBlogTalkRadio, sisingatha kwaye sinyusa ipodcast yethu apho kwaye siyisasaza ngeTunes, iStitcher, kunye nezinye iindawo. I-BlogTalkRadio ine studio sayo kodwa lixesha lokwenyani, irekhoda ebukhoma engenandlela yokulungisa imicimbi ngesandi. Sonakalise uninzi lweepodcast sizama ukwenza ukuba baphile!
UDrew Burns Udliwanondlebe
Udliwanondlebe lukaScott Brinker
Inqaku elinye koku - ngalo lonke ixesha ndibonakala ndilungile kule GarageBand, bayatshintsha ujongano kunye neendlela. Ndiqhuba ngamandongomane!
Oku kwanele okwangoku. Mna noBrad sijonge kwikamva apho sinokuthi sizise izixhobo kwisiza nakwiminyhadala- kwaye uBrad unokuxuba umsindo kwaye aqinisekise amanqanaba afanelekileyo kude nesitudiyo sakhe. Iya kuba yinto encinci yotyalo-mali, kodwa iya kuthi isinike istudiyo esiphathekayo esinokuyisebenzisa naphi na-kwiofisi yethu okanye kwiziko leenkomfa. Logama nje sinobubanzi bebhendi, siya kuba nakho ukubeka ndawonye ipodcast yobungcali.
tags: umthungi wezihlanguibhajethistudio zokudala zombieuthungelwano lwe-ecammibhendi yegarajiIntengiso yePodcastxuba ipodcastUdliwanondlebe lwe-podcastirekhodi podcastirekhodi skypeirekhodi lodliwanondlebe no-skypeskype irekhodaskype ukurekhoda
Ungasiphucula njani isiCwangciso seNtengiso esiSilelayo